Landa i-Play Store ye-PC - Landa i-Google Play Isitolo | Kusuka kuLinux
Blogger | | eziningana
Landa i-Play Store ye-PC, kuyinto ongayenza kusuka kulo mzuzu futhi kusukela esitolo esisemthethweni se-Google Play. Le ndawo inenombolo engacabangi yezicelo, ezinhlobonhlobo eziningi ongakhetha kuzo. Kusuka ku-PC yakho, uzobona ukuthi kanjani izinhlelo zokusebenza, uziyale ngezinhlobo, phakathi kwayo uzobona umculo, ukufunda noma ama-movie. -Google Play ayifani ne- Isitolo Play, futhi kufanele sihlukanise phakathi -Google Play yindawo yokulanda imidlalo nezinhlelo zokusebenza, futhi Isitolo Play, uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi ufinyelele kule ndawo.
Ngokusebenzisa Isitolo Play Ungalanda inani elikhulu lemidlalo nezinhlelo zokusebenza ongazithokozela, zikwenze uzijabulele zombili amathuluzi wokuzilibazisa nawusizo. Kuzoba lula kuwe ukuhamba phakathi kwazo zonke lezi zinhlelo zokusebenza, ngoba unomklamo, ngokuhlangana ne-interface, okwenzayo kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ujabulele i-Google PlayNgaphandle kwalokho, ungasuka kokukhethwa kukho uye kwenye kalula futhi ngokushesha okukhulu. Cabanga ukuthi ufunani, bese uzibeka enkethweni oyikhethile. Impela kukhona obukade ukufuna, phakathi kwazo zonke lezo zinhlelo zokusebenza, ngaphandle kwalokho uzobona ne izinhlobo eziningi zezinketho, njengalezo zezincwadi, zalabo abathanda ukufunda okuhle, noma nakwalabo abafuna ukujabulela umculo.
Uma ungomunye walabo abathanda ukuzama ukuhlola imidlalo nezinhlelo zokusebenza ze-Android, i-Google Play yenza kube lula kuwe, ikwenze kube lula kakhulu ukufaka zombili izinhlelo zokusebenza, kanye cinga noma landa okunye ukuzijabulisa, njengama-movie, umculo osuvele ushiwo noma ezinye izinhlobo zezinhlelo zokusebenza. Endaweni lapho izinhlelo zikhona, zinokuningi kwalokhu, ukuze ukwazi ukujabulela ku-PC yakho ngohlelo lwe-Android, ukufinyelela endaweni yokugcina lapho uzobona iningi lalezi zinhlelo zokusebenza, okuyimidlalo ngokuyisisekelo.
Qaphela ukuthi iningi lalezi zicelo liyakhokhwa, nokuthi eminye yemidlalo nayo, ngisho neminye evelele kakhulu njengeGoogle Play. Kodwa futhi ku-Google Play uzoba nezinhlobo zemidlalo yevidiyo kanye nezinhlelo zokusebenza ezithakazelisa kakhulu, futhi ongeke uzikhiphele eceleni.
Ekuqaleni kwayo, I-Google Play yaziwa njengeMakethe ye-Androidkepha ngokuhamba kwesikhathi liguqule igama laba njengoba sazi namuhla, -Google Play. Ngakho-ke manje uyazi, uma into yakho iyimidlalo noma ezinye izinhlelo zokusebenza Android, unendawo ku -Google Play. Isitolo Play ithuluzi noma uhlelo lokusebenza elenza -Google Play noma yini namuhla, iwebhusayithi enezinhlelo zokusebenza eziningi nemidlalo yokulanda. Isitolo Play Kuyinto uhlelo lokusebenza olusetshenziswa kumadivayisi, futhi lungafakwa ngaphandle kwezinkinga. Ngakho-ke, uzoba nemidlalo eminingi nezinhlelo zokusebenza ongazijabulela.
Isitolo Play Inezici ezibonakala ziyinkimbinkimbi ngandlela thile, kepha lokho akunjalo ngempela. Uzobona ukuthi uma ukhetha izinketho -Google Play zilula, zikwenza ubone zonke izinhlobo zolwazi ku- I-Google Play. Lapho usufake Isitolo Play, kanye nokufinyelela -Google Play, uzobona inani elikhulu lezicelo ezikhona, ezikunikeza imininingwane ebanzi, zivela ezansi kwekhasi, ukuthi bangaki abasebenzisi ulande umdlalo noma uhlelo lokusebenza. Khumbula ukuthi uma uhlelo lokusebenza noma umdlalo unokulandwa okuningi, kusho nokuthi uzinzile efakwe kudivayisi, ngakho-ke ngeke konakalise noma yiluphi ulwazi onalo.
Ukuphawula kungenye indlela yokubona ukuthi ukwethembeka nokuqapha kwemidlalo nezinhlelo zokusebenza, kuvela ekugcineni. Omunye umsebenzi we -Google Play eduze Play Store, ukuhlala unazo zonke izinhlelo nezinhlelo ezizokwenza ukuthi idivayisi yakho isebenze, isebenzise zonke izinsiza ezinikezayo ngendlela ephelele.
Landa isixhumanisi seBlueStacks
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Landa i-Play Store ye-PC
lidia lopez kusho
Phendula ku-lidia lopez
UViviana Trochez kusho
lolu hlelo luhle
Phendula ku-viviana trochez
UJuan Triana kusho
ngiyabonga bathi kuhle kakhulu
Phendula ku-juan triana
Ulanda kanjani ???
!!! INDLELA YOKULANDA !!!
lolu hlelo lungisize kakhulu
Anginalo ihaba nakancane
Kuhle kubukeka kukuhle kepha kukhompyutha yami ye-canaima ayikwazi ukulandwa njengoba ngiyilanda
ngicela ungivumele ngilande isitolo sokudlala noma isitolo sohlelo lokusebenza !!!!